Fomba 5 hanamboarana oram-panala namboarina - Ikkaro
firosoana >> Fanandramana trano >> Fomba fanamboarana lanezy volomparasy
Ireo no fangaro izay hampiasainay amin'ny resipeo rehetra.
Volombava fiharatana (€ 0,9)
Sodium bicarbonate (€ 0,8)
Cornstarch (€ 2,2)
Conditioner (izay ananantsika ao an-trano dia tsy dia ampiasaina firy)
Diaper sy / na polyacrylate sodium
Mamela horonan-tsary nataoko nanao ireo karazana lanezy isan-karazany aho mba ho hita mazava kokoa ny fizotrany. Ny fomba diaper notehiriziko farany. Manana horonan-tsary vitsivitsy hafa vonona aho fa halefako tsy miankina amin'ireo lahatsoratra bilaogy. Avelako ianao ity rohy ity hahafahanao misoratra anarana amin'ny fantsona Youtube
Andao hiditra amin'ny olana.
Fomba 1 - Miaraka amin'ny diaper
Mora dia mora ny teôria, hitantsika sy novakiantsika tamin'ny tranonkala Internet an-jatony na an'arivony izany. Maka diapers maromaro isika, sokafy ary esory ny landihazo izay mitafy ny otrikaretina. Izy io dia afangaro amin'ny polyacrylate sodium.
Polyacrylate dia polymer iray izay mahazaka hatramin'ny 500 heny ny habeny ary rehefa naka rano izy dia tena mitovy amin'ny lanezy.
Saingy ity, izay amin'ny ankapobeny dia tsotra amin'ny fampiharana, dia nahita olana vitsivitsy aho, izay tsy hitako na iza na iza maneho hevitra. Angamba izaho no tsy nanam-bintana.
Polyacrylate dia afangaro amin'ny fibre landihazo ary ny nanasaraka azy dia tena sarotra tamiko. Nanandrana lampin-droa roa aho, ny iray ho an'ny olon-dehibe mba hahafahany hanana bebe kokoa ary iray ho an'ny zazakely ary ny zavatra mitovy no nanjo ahy roa, toy ny nanosahako ny fibre landihazo, saika tsy nisy polymer nianjera fa rahona fluff miforona manodidina mitsingevana eny amin'ny rivotra ianao, vita amin'ny fibre landihazo ary ataoko fa polymer. Ary ny marina dia tsy tiako ny mitelina azy, mainka ny mieritreritra fa ny zanako-vavy miaina izany.
Ka nariako io fomba io mandra-pahitako fomba iray mahomby sy azo antoka hanalana ilay polyacrylate. Mandritra izany fotoana izany, raha te hanandrana ity fomba fahandro ity ianao dia amidiny amina toerana maro izany.
ihany koa afaka mividy polyacrylate sodium isika toy izany.
Fomba hitako fa mety amin'ny ankizy ary inona no hataoko andrana ho an'ny ankizy Ireto manaraka ireto:
Fomba 2 - Kornesta sy sombim-bary
Andao atomboka amin'ny Vovon-tsakosina sy fomba fahandro miharatra.
Maizena dia lafarinina katsaka, novidiko ity marika ity fa afaka mividy hafa ianao, ny mahasamihafa azy amin'ny lafarinina mahazatra dia ny hoe tsara kokoa io, voasivana kokoa.
Tsy manome ny ampahany marina amin'ilay fangaro izahay. Eto isika dia hanisy tsiranoka katsaka sy sombin-javatra fotsiny ary afangaro mandra-pahatongantsika ao anaty lanezy ilay firafitra tiana.
Ny lanezy vita amin'ny vovo-katsaka sy sombin-javatra dia manana fikitihana malefaka be izay tian'ny ankizy betsaka. Somary mavo ilay izy ka tsy manome izany fahatsapana oram-panala izany, toy ny mixtures miaraka amin'ny bikarbonate.
Ny zavatra hafa tokony ho raisina dia ny vidin'ity lafarinina ity, izay mihoatra ny € 2 ary raha te-hanao habetsahana isika dia ho lafo kokoa noho ny amin'ny bikarbonat. Tasy koa. Tsy mihoa-pefy velively izy io, ary mandeha mora foana izy io, fa mandoto na aiza na aiza no kasihinao.
Fomba 3 - miaraka amin'ny soda fanaova sy ny volombava fiharatana
Ity fomba fahandro manaraka ity dia miaraka amin'ny fanaova soda sy ny volon'osy fiharatra. Araka ny hitanao dia be mpampiasa amin'ny fanandramana ao an-trano ny volombava manaratra, manomboka amin'ireo karazana lanezy ireo ka hatramin'ny karazan-kalamanjana samihafa.
Rehefa mividy soda bicarbonate dia manoro hevitra anao aho haka ireto harona kilo ireto izay tena mora vidy, lafo 80 na 90 cents ny vidiko. Raha raisinay ireo kapoaka plastika dia kely kokoa ny habeny ary lafo kokoa izany.
Ny fomba fiasa dia mitovy amin'ny an'ny Cornstarch, manampy bicarbonate, foam izahay ary mifangaro sy feno amin'izay ilainay. Raha goavambe loatra izy dia mametraka bicarbonate bebe kokoa isika raha malefaka loatra ka rehefa mifatotra dia tsy mitazona na inona na inona endrika satria apetrantsika aminy bebe kokoa. Ary toy izany hatrany mandra-pahitantsika ny firafitra tiana.
Tsy toy ny oram-panala teo aloha, ity iray ity dia fotsy madio, ary ny fahitana azy dia toy ny oram-panala tena izy.
Fomba 4 - soda sy rano fanaova
Ary miroso amin'ny inona isika io no lasa fomba tiako indrindra, manamboatra lanezy artifisialy amin'ny soda sy rano fotsiny.
Ary ilay izy, na dia toa lainga aza, ny lanezy amin'ny snow toy izao dia mitovy amin'ny an'ny foam sy ny an'ny conditioner izay ho hitantsika amin'ny farany. Be loatra aho ka tsy nanisy marika ny lovia nitehirizana ny lanezy; nilalao ny zanako vavy ary tsy fantatro izay iray. Ilay miloko Maizena ihany no fantatro haingana tamin'ny loko.
Tena liana tamin'ny fampahafantarana azy ireo aho satria tiako ho hita ny fivoaran'ny tsirairay nandritra ny andro ary tamin'ny farany tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny manandrana azy ireo aho, na inona na inona fikasako azy ireo, tsy haiko ny manavaka azy ireo. Ny mikasika dia somary tsy mitovy amin'ny tsirairay, fa tsy misy izay mahatonga anao hiteny hoe malefaka kokoa io ary avy amin'ny foam, ohatra.
Ary araraotiko izany mba hahatsiarovako fa ho henjana kokoa amin'ny fanandramana amin'ny ho avy ary manoratra zavatra, ampahafantaro azy tsara ary soraty ao anaty kahie ny zava-drehetra mba tsy hahavery ny angona rehefa mandeha ny fotoana na amin'ny fanaraha-maso rehetra mandritra ny andrana.
Ny fomba fahandro amin'ny lanezy dia mitovy amin'ny rehetra, rano bicarbonate ary afangaro. Tsy mila mandraraka rano be ianao.
Tamin'ny voalohany dia nolazaiko fa io no tiako indrindra satria raha mahazo valiny mitovy amin'izany isika dia heveriko fa ny zavatra tsara indrindra dia ny manao ny tsotra indrindra. Marina fa tsy dia mankafy firy ny ankizy amin'izany, satria tiany ny maloto ny tanany, fa ity no kinova farany mora indrindra.
Fomba 5 - soda sy soda fanaova
fomba fahandro farany teo aloha ary hazavao ny fomba popoka malaza.
Amin'ity tranga ity dia afangaroy ny soda sy ny soda. Izy io, araka ny eritreritro, no fomba miraikitra indrindra, satria na dia miraikitra be aza ny sombin-tsakafo, mahafinaritra ny fikasihanana ary avy eo mifangaro tsara ary miala amin'ny tanana. Saingy mampamintina ny tananao ilay mpanera, tsy dia tiako loatra izany, mifangaro tsara ny ota ary misaraka amin'ny tananao, saingy mijanona savony ihany izy ireo.
Mila mametraka vola kely ianao, be loatra ny napetrako ary mba hahazoana ilay firafitra tsara tokony hametrahako «conditioner» be dia be.
Toa mavesatra noho ny teo aloha ny oram-panala, saingy eo am-piandohana fotsiny izy io, rehefa lasa ny ora vitsivitsy dia lasa tsy mahay manavaka izy rehetra.
Fampitahana ireo karazana lanezy volomparasy
Avelantsika eto ny diaper na ny polyacrylate sodium satria tsy azoko. Mbola tsy nampitahako ny polyacrylate ary napetrako tao amin'ilay fampitahana.
Ao amin'ny sarin'ny galeraly no nahazoana ny lanezy 4. Ny 3 an'ny bicarbonate a priori dia tsy hitovizany, fa jereo ilay ho an'ny Maizena. Hitanao ve ny mavo kokoa?
Ny fahadisoam-panala avy amin'ny orampanala dia tonga aorian'ny 24 ora, maina ny fifangaroana ary ny sisa tavela dia toy ny hoe manana vovo-katsaka na bicarbonate malalaka isika ary mila mamerina manamboatra ilay fangaro na mandena azy mba hametrahana ny oram-panala indray. Izay no mahatonga ny fomba rano no tiako indrindra.
Amin'ity lafiny ity dia toa tsara kokoa amiko ny sodium polyacrylate satria fantatro fa maharitra ela kokoa izy io. Raha vao manandrana aho dia lazaiko anao ;-)
Sakana varahina ho an'ny sifotra
Sea Glass: Torolàlana ho an'ny mpanangona
Sokajy Fanandramana trano, Fanandramana ho an'ny ankizy Ticket navigation
Fanehoan-kevitra 2 momba ny «Ahoana ny fanaovana lanezy artifisialy»
21 Desambra 2018 amin'ny 9:39 alina
Misaotra Lahatsoratra nahaliana be io.
22 Desambra 2018 amin'ny 11:42 maraina
Faly be aho fa tianao :)
Tsy ho ela ilay manana fotaka ;-)
1 Fomba 1 - Miaraka amin'ny diaper
2 Fomba 2 - Kornesta sy sombim-bary
3 Fomba 3 - miaraka amin'ny soda fanaova sy ny volombava fiharatana
4 Fomba 4 - soda sy rano fanaova
5 Fomba 5 - soda sy soda fanaova
6 Fampitahana ireo karazana lanezy volomparasy